ကိုယ်လက်မနှီးနှောမီ နမ်းရှုပ်ခြင်းက အဓိကအရေးပါကြောင်း လေ့လာမှုများကဖော်ပြ | Buzzy
ကိုယ်လက်မနှီးနှောမီ နမ်းရှုပ်ခြင်းက အဓိကအရေးပါကြောင်း လေ့လာမှုများကဖော်ပြ
ရိုးသားမှု နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုများကအရေးပါလှကြောင်း Ms Carr ကပြောဆိုထား...
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Australians လူမျိုးတွေရဲ. လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေနှင့်ပတ်သက်လို့ လေ့လာချက်တွေအရ တစ်လကို တစ်ကြိမ် သာစိတ်ပျော်ရွှင်စွာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ စုံတွဲ ၅ တွဲကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။အဲ့ ဒီစုံတွဲတွေအနေဖြင့် အခြားအချိန်တွေမှာပျော်ရွှင်မှု မရကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီး အိမ်ထောင်ရှိသူများနှင့် လက်မထပ်ခင် အတူနေတဲ့ စုံတွဲတွေ အိပ်ယာထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကို ဘယ်သူတွေ ပိုပေးနိုင်သလဲဆို တဲ့ ကိစ္စကို တော့ အဲ့ ဒီလေ့လာချက်တွေထဲက ဖော်ပြထားပါတယ်။ Ms Car ဆိုတဲ့ အမျိုး သမီးကတော့ သူမရဲ. လိင်ဆက်ဆံမှု အပေါ် အမြင်တွေကို ယခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကတော့ လိင်ဆက်ဆံမည့် သူ များဟာ နှစ်ဦးစလုံး ရိုးသားမှု ကို အခြေခံရပါ့မယ်။အဲ့ ဒါကို အခြေခံပြီးမှ ချစ်ခင်နှစ်သက် မှု တွေဟာ တစ်နေရာကနေတစ်နေရာကို ရောက် ရှိပြီး အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ထပ်ထားသည်ဖြစ် စေ ၊အတူနေသည်ဖြစ်စေ ရိုးသားမှု ကအဓိကကျတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်လို့ သူမက Australia နိုင်ငံသတင်းစာ Daily Mail ကို ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ Australians လူမြိုးတှရေဲ. လိငျဆကျဆံတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှနှေငျ့ပတျသကျလို့ လလေ့ာခကျြတှအေရ တဈလကို တဈကွိမျ သာစိတျပြျောရှငျစှာ လိငျဆကျဆံတဲ့ စုံတှဲ ၅ တှဲကို တှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။အဲ့ ဒီစုံတှဲတှအေနဖွေငျ့ အခွားအခြိနျတှမှောပြျောရှငျမှု မရကွဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ လကျထပျပွီး အိမျထောငျရှိသူမြားနှငျ့ လကျမထပျခငျ အတူနတေဲ့ စုံတှဲတှေ အိပျယာထဲမှာ စိတျလှုပျရှားမှု ကို ဘယျသူတှေ ပိုပေးနိုငျသလဲဆို တဲ့ ကိစ်စကို တော့ အဲ့ ဒီလလေ့ာခကျြတှထေဲက ဖျောပွထားပါတယျ။ Ms Car ဆိုတဲ့ အမြိုး သမီးကတော့ သူမရဲ. လိငျဆကျဆံမှု အပျေါ အမွငျတှကေို ယခုလို ပွောပွထားပါတယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကတော့ လိငျဆကျဆံမညျ့ သူ မြားဟာ နှဈဦးစလုံး ရိုးသားမှု ကို အခွခေံရပါ့မယျ။အဲ့ ဒါကို အခွခေံပွီးမှ ခဈြခငျနှဈသကျ မှု တှဟော တဈနရောကနတေဈနရောကို ရောကျ ရှိပွီး အထှတျအထိပျရောကျအောငျလုပျဆောငျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လကျထပျထားသညျဖွဈ စေ ၊အတူနသေညျဖွဈစေ ရိုးသားမှု ကအဓိကကတြဲ့ အခကျြဖွဈတယျလို့ သူမက Australia နိုငျငံသတငျးစာ Daily Mail ကို ပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လိင်ကိစ္စ ကို မဆောင်ရွက်ခင်မှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိနေတာဟာ အဓိကကျတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖုန်းတွေ အင်တာနက်တွေကို အသုံးပြု ပြီး ပြောဆိုနေတာထက် လက်တွေ့ဘ၀ကို ပိုပြီးအချိန်ပေးသင့်ကြောင်းလည်းပြောထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂရုစိုက်မှု ရှိဖို့ လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီး အဲ့ ဒါကို အချစ်လို့ တင်စားထားပါတယ်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲ ဆွေးနွေးမှု မပြု ပဲ လိင်ဆက်ဆံပါက စိတ်ပိုိင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု မျိုး မရနိုင်သည့် အတွက် ကျေနပ်မှု ရှိဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ သူမကပြောထားပါတယ်။ မိမိရဲ. အပေါင်းအဖော်နှင့်အတူ မနက်စာ အတူ စားတာမျိုး ၊ကားစီးတဲ့အခါ ကားတံခါးကို ဖွင့်ပေးတာမျိုး နှင့် ယဉ်ကျေးတဲ့ ဆက်ဆံရေး တွေက လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အခါ ကျေနပ်မှု မျိုး ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လိငျကိစ်စ ကို မဆောငျရှကျခငျမှာ ရငျးရငျးနှီးနှီး ရှိနတောဟာ အဓိကကတြဲ့ အခကျြဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဖုနျးတှေ အငျတာနကျတှကေို အသုံးပွု ပွီး ပွောဆိုနတောထကျ လကျတှဘေ့ဝကို ပိုပွီးအခြိနျပေးသငျ့ကွောငျးလညျးပွောထားပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဂရုစိုကျမှု ရှိဖို့ လိုအပျနတောဖွဈပွီး အဲ့ ဒါကို အခဈြလို့ တငျစားထားပါတယျ။ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ မကျြနှာခငျြးမဆိုငျပဲ ဆှေးနှေးမှု မပွု ပဲ လိငျဆကျဆံပါက စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဆကျစပျမှု မြိုး မရနိုငျသညျ့ အတှကျ ကနြေပျမှု ရှိဖို့ မလှယျဘူးလို့ သူမကပွောထားပါတယျ။ မိမိရဲ. အပေါငျးအဖျောနှငျ့အတူ မနကျစာ အတူ စားတာမြိုး ၊ကားစီးတဲ့အခါ ကားတံခါးကို ဖှငျ့ပေးတာမြိုး နှငျ့ ယဉျကြေးတဲ့ ဆကျဆံရေး တှကေ လိငျဆကျဆံတဲ့ အခါ ကနြေပျမှု မြိုး ပေးနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။